Ubuncinci beTekhnoloji yeNtengiso yeNtengiso eziPhezulu Martech Zone
Ngo-2011, usomashishini uMarc Andreessen wabhala ngokudumileyo, isoftware itya umhlaba. Ngeendlela ezininzi, u-Andreessen wayenyanisile. Cinga malunga nokuba zingaphi izixhobo zesoftware ozisebenzisa mihla le. I-smartphone enye inokuba namakhulu ezicelo zesoftware kuyo. Kwaye sisixhobo esinye esincinci epokothweni yakho.
Ngoku, masisebenzise umbono ofanayo kwilizwe loshishino. Inkampani enye inokusebenzisa amakhulu, ukuba kungangamawaka, kwizisombululo zesoftware. Ukusuka kwezemali ukuya kwezabasebenzi kunye nokuthengisa, onke amasebe axhomekeke kwitekhnoloji kwindawo ethile. Ibe yinto ebalulekileyo ekuqhubeni ishishini kwihlabathi lanamhlanje.
Ukuthengisa akukho kwahlukile. Amaqela amaninzi anamhlanje okuthengisa axhomekeke kwizisombululo ezahlukeneyo zesoftware-njengenkonzo (SaaS) yokunxibelelana kweqela elilawulayo, ukulawula iiprojekthi eziqhubekayo, kunye nokulandela umkhankaso wokusebenza. Kodwa ngaphezulu Iimveliso ze-SaaS ezingama-7000 kwindawo nje yentengiso, kunokuba nzima ukwahlula kufuneka ube nazo isuka e mnandi ukuba.
Kule nqaku, ndiza kuxubusha ukuba zeziphi izisombululo zesoftware ezihambelana nokuthengisa kwakho kwitekhnoloji kwaye kutheni. Kwaye ndiza kwabelana ngemizekelo ethile apha endleleni.
Yintoni uStack weNtengiso?
Igama elithile isitaki sentengiso ibhekisa kwingqokelela yezixhobo zesoftware kunye neetekhnoloji ezisetyenziswa ngabathengisi ukwenza imisebenzi yabo. Iwela phantsi kwekota enkulu isitaki sobuchwephesha esetyenziswa rhoqo ziingcali ze-IT ukubandakanya iilwimi zenkqubo kunye nezikhokelo zophuhliso lwesicelo.
Indawo yokuthengisa iluluhlu lwezisombululo ekufuneka zinikwe iqela lakho ukuba lenze owona msebenzi mhle. Ezi zixhobo ziyimfuneko yokwandisa ukusebenza ngokukuko, ukukhuthaza intsebenziswano, kunye nokuphucula unxibelelwano.
Uyakha njani i-Stack yeTekhnoloji yokuThengisa
Kule mihla, kukho isoftware phantse yonke into. Indlela endibona ngayo, zimbini iintlobo zezixhobo ze-SaaS: kufuneka ube nazo kwaye mnandi ukuba.
Izixhobo ekufuneka zenziwe zezo zibalulekileyo ekwenzeni umsebenzi wakho. Ezintle-to-haves zilungile, kulungile ukuba nazo. Banokukunceda uyile ngakumbi okanye ulungelelanise, kodwa kusenokwenzeka ukubetha iinjongo zakho ngaphandle kwabo.
Kubalulekile ukugcina isitaki sakho sokuthengisa sithembekile. Ngoba? Kuba isoftware iyabiza. Ixabiso eliphezulu ngokwenene. Amashishini anokuchitha amawaka eedola kwiilayisensi zesoftware ezingasetyenziswanga ukuba abaqwalaseli ngononophelo ukuba zeziphi izixhobo eziyimfuneko.
Ukongeza, ukuba neemveliso ezininzi ze-SaaS kunokudideka kwaye kwenze kube nzima ukuhlala uhlelekile. Isoftware kufanele ukuba ibenze lula ubomi bakho, hayi nzima.
Apha ngezantsi, uya kufumana uluhlu lwezixhobo ze-SaaS ekufuneka ubenazo kwisitaki sakho sobugcisa:
Ulawulo lobudlelwane babathengi (CRM) Isoftware yenzelwe ukunceda amashishini ukuba akhule ngokuzibandakanya kwaye akhe ubudlelwane kunye nabathengi abakhoyo nabaza kubakho.
Uninzi lwezixhobo zeCRM zisebenza njengeziko ledatha eligcina ulwazi lwabathengi kunye nonxibelelwano. Ngaphakathi kwesixhobo, abasebenzisi banokubona yonke imbali yobudlelwane nomthengi, kunye nolwazi olunxulumene neentengiso eziqhubayo ngoku.
Isoftware yeCRM isetyenziswa ikakhulu kukuthengisa, ukuthengisa, kunye namaqela alawulayo.
Amaqela okuthengisa axhomekeke kwiCRM ukulungiselela ulwazi olunxulumene nethemba kunye namathuba. Abaphathi bayisebenzisa ngokufanayo, ukugcina iliso lisondele kwingeniso nakwimibhobho yokuthengisa. Kwicala lokuthengisa, i-CRM iluncedo ekulandeleleni umkhondo ofanelekileyo wokuthengisa kunye namathuba.
I-CRM ibalulekile ekuvaleni umsantsa phakathi kwamaqela entengiso kunye nawokuthengisa kunye nokufikelela kulungelelwaniso olungcono kumbutho wonke.
Kukho amakhulu ezixhobo zeCRM kwintengiso. Nazi iindlela ezimbalwa zokuma:
lesforce -I-Salesforce ngumboneleli ophambili wesoftware esekwe kwilifu kwiCRM yamashishini abo bonke ubungakanani. Nangona iCRM ingumnikelo ophambili weSalesforce, inkampani iyandisile imigca yayo yemveliso ukubandakanya inkonzo yabathengi, ukuthengisa ngokuzenzekelayo, kunye nezisombululo kwezorhwebo. Phantse I-19% iyonke isabelo sentengiso, I-Salesforce ilawula indawo yeCRM. Kwaye ngesizathu esivakalayo-iqonga lihlala liphezulu phakathi kwabasebenzisi kunye nabaphandi malunga nelifu elinamandla, ngakumbi xa kufikwa kwindawo yeshishini.
Iinkcukacha zoqhagamshelwano Highbridge yoNcedo lwabathengisi
ICRM encinci ecaphukisayo -I-CRM encinci yokuCaphukisa yenzelwe ngokukodwa amashishini amancinci afuna isixhobo esilula ngaphandle kwazo zonke iintsimbi kunye neempempe. Ithe ngqo, kwaye unokuthi, "ayicaphukisi"!
Bhalisela iCRM eNcinci
Isoftware yolawulo lweprojekthi ivumela amaqela ukuba alungelelanise unxibelelwano, alawule ukuhamba komsebenzi, kwaye agcine iithebhu kumalinge akhoyo eprojekthi, zonke zikwindawo enye.
Kuqhelekile kubathengisi ukuba basebenze kwiindawo zokusebenzisana ezijolise ikakhulu kwiprojekthi. Nokuba yeyiphi indlela yokuthengisa osebenza kuyo, isixhobo solawulo lweprojekthi kubalulekile ukuhlala ucwangcisiwe kwaye ulandele inkqubela phambili yeprojekthi.
Izisombululo ezininzi kolu luhlu ziya kukuvumela ukuba wenze ukuhamba kwesiko kwimisebenzi yemihla ngemihla / yeveki, ikuncede uhlale unika ingxelo ngexesha elibekiweyo. Oku kuluncedo ngakumbi ukuba iqela lakho lisebenza ngokupheleleyo okanye ngokuyinxalenye kude.
Ulawulo lweProjekthi Imizekelo yeSoftware
Ulawulo lweProjekthi yintengiso enabantu abaninzi, nezisombululo ezininzi kumaxabiso ahlukeneyo. Imizekelo ibandakanya:
asana -I-Asana sisisombululo esilinganiselweyo solawulo lweprojekthi yamashishini abo bonke ubungakanani. Isixhobo sinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zolawulo lomsebenzi ezivumela ukusebenzisana kunye nokwenza ngokwezifiso. UAsana uxhasa ukuveliswa kweqela kunye nomsebenzi ngamnye, ukuvumela umsebenzisi ukuba enze ngokwezifiso ukuhamba kwabo kunye negalelo kumanyathelo eqela. Abasebenzisi banokwakha imisebenzi yabo kwikhalenda, besenza ukuba kube lula ukubona ukuba kufanelekile kwaye nini.
Zama uAsana mahala
Qhubeka -Wrike sisixhobo solawulo lweprojekthi eyakhiwe ngamanqanaba okumgangatho wamashishini kumashishini kwimowudi yokukhula kwehyper. Nangona i-Wrike ibonelela ngokudityaniswa kwamanqanaba amashishini amaninzi, isisombululo sisasebenza ngokupheleleyo kwimarike yaphakathi kunye namashishini amancinci ngokunjalo.
Qalisa Simahla kwiWike
Ngo-2016, inkampani yandisa imveliso yayo ukuze ibandakanye iWrike yeeNtengiso, isixhobo esenzelwe ngokukodwa ukulinganisa ukuhamba komsebenzi okuqhelekileyo.
I-Wrike yabarhwebi ibekwe ngokukodwa ukunceda amaqela okuthengisa ukuba ahlale elungelelanisiwe kwaye enze kumanyathelo aqhelekileyo anje ngokudala umxholo, ulawulo lomnyhadala, kunye nokwazisa kwintengiso. Isixhobo sikwabonelela ngeempendulo zeprojekthi ukukunceda ukuba uqalise.
Isoftware yokuthengisa izenzekelayo inceda amaqela okuthengisa azenzele ukuhamba okuhambelana nokukhokelela kwisizukulwane, ukuthumela imithombo yeendaba kwezentlalo, kunye nemisebenzi yokuthengisa nge-imeyile.
Ngaphandle kwezibonelelo zokonga ixesha ezicacileyo eziza nolu hlobo lwesixhobo, ukuthengisa isoftware ezenzekelayo kuyanceda ekwenzeni umyalezo owenzelwe wena kwimikhankaso eyahlukeneyo ngaphandle kwesidingo somzamo wesandla. La maphulo anokusekwa ukuba asebenze ubusuku nemini, nokuba awukho ukuze uzilawule.
Kuqhelekile ukuba izixhobo zokuthengisa ezizenzekelayo zidityaniswe nezinye iitekhnoloji kwiqonga elinye lokubandakanya.
HubSpot -IHubSpot liqonga elithandwayo lokuya ekukhuleni elijolise ekunikezeleni amashishini ngokuthengisa, ukuthengisa, kunye nezixhobo zoncedo lwabathengi abazifunayo ukuze baphumelele. IHubSpot's Marketing Hub yeyona ndawo iphambili yokuthengisa. Isixhobo sinobubanzi bezakhono ezinxulumene isizukulwana esikhokelayo, ukuthengisa nge-imeyile, kunye nohlalutyo.
Qala nge Hubspot
MailChimp -Into eyaqala njengenkonzo yokuthengisa i-imeyile yakhula yaba liqonga lentengiso le-Mailchimp elidumileyo elilungiselelwe amashishini amancinci.
I-Mailchimp inomtsalane ngakumbi kumashishini amancinci ngenxa yezicwangciso zayo zamaxabiso eziguquguqukayo.
Kukho imodeli yasimahla ebonelela ngayo yonke imisebenzi esisiseko yokuthengisa kumashishini akumanqanaba awo okuqala. I-Mailchimp ide ibonelele ngesicwangciso sokuhlawula njengoko usiya kumaqela acwangcisa kuphela ukusebenzisa isixhobo apha-naphaya.
Izixhobo zeNjini yokukhangela
Ukuphuculwa kweinjini yokukhangela (i-SEO) isoftware yenzelwe ukwenza ukuba amashishini aphucule umgangatho wokukhangelwa kwezinto eziphilayo kwaye afumaneke ngakumbi.
Izixhobo ze-SEO zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokunceda abathengisi ukuba benze uphando lwamagama aphambili, ukwakha i-backlinks, kunye nokwenza uphicotho lomxholo wewebhu okhoyo ukuphucula ukukhula kwedijithali ngokubanzi. Uninzi lwezi zisombululo lukwanazo izixhobo zohlalutyo ezinceda abasebenzisi ukuba balandele kwaye balinganise iimpembelelo zeenzame zabo ze-SEO.
Esona sitaki sisebenzayo sixhobisa iqela lakho lentengiso ukuba lenze izigqibo ngokuzithemba. Njenge-SEO, kubalulekile kum ukuba ndikwazi ukufikelela kwisixhobo esiphambili sophando njenge Semrush, Isixhobo sokwakha ikhonkco njenge-Ahrefs, kunye nesixhobo sokuhlaziya njengeGoogle okanye iAdobe Analytics. Yonke enye into ilungile ukuba nayo, kodwa ayimfuneko.
U-Liam Barnes, ingcali eyi-Senior SEO kwi Isikhokelo
Imizekelo yeSoftware ye-SEO
Iindaba ezimnandi. Akunyanzelekanga ukuba ube yingcali yokwazi ukusebenzisa isoftware ye-SEO.
Uninzi lwezisombululo zesoftware ye-SEO zinomdla kwaye kulula ukuzisebenzisa, nkqu nakwabaqalayo. Kwelinye icala, kukho izixhobo ze-SEO eziphambili phaya nazo ezifuna isoftware yobuchule obuninzi. Konke kuxhomekeke kwinjongo ojonge ukuyifeza ngophando lwendalo!
Ahrefs -Ii-Ahrefs zibonelela ngeseti ebanzi yezixhobo ze-SEO ngeendlela ezahlukeneyo kubandakanya uphando lwamagama aphambili, ukulandelela inqanaba, ukwakha ikhonkco kunye nokwenza ingxelo. Le yimveliso yonke-in-nye eyilelwe ukunceda abathengisi kunye neengcali ze-SEO kuwo onke amanqanaba amava ukuba anyuse umgangatho wokugcwala kwabantu.
Qalisa ukulingwa kwakho kwe-Ahrefs
Ii-Ahrefs ziqale njengesixhobo se-backlink; Nangona kunjalo, ukunikezelwa kwayo kwandiswe kwinkampani njengomdlali ophambili kwisithuba se-SEO. Ukuba ufuna isixhobo esilula kwiphepha le-SEO elenza (phantse) yonke into, ii-Ahrefs zinokuba lukhetho lwakho.
ISciderFrog's SEO Spider -I-ScreamingFrog yi-arhente yokuthengisa esekwe e-UK eyaziwa ngemveliso yesigcawu seSEO Isigcawu seSEO ngumkhangeli web ethandwayo osetyenziselwa ukwenza uphicotho olunzulu lobuchwephesha be-SEO. Sebenzisa isixhobo, abathengisi bafumanisa amakhonkco aphukileyo, ukuphinda uqondise uphicotho, ukufumanisa umxholo ophindiweyo kunye nokunye. Isisombululo se-SEO Spider sisebenza ngokukodwa ukuba eyona nto ibaluleke kakhulu kwii-SEO zobugcisa. Esi sixhobo sisetyenziswe kakuhle ngokudibanisa nesixhobo se-SEO sonke, njenge-Ahrefs. Ukuba umtsha kwicala lobuchwephesha bezinto, iScellingFrog ibonelela ngohlobo lwasimahla olunezinto ezisisiseko zokuphicothwa.
Khuphela ukukhwaza iFrog SEO Spider
Izixhobo zosasazo lwentlalo zibonelela ngokusebenza okuvumela abasebenzisi ukuba bacwangcise iiposti, ukufikelela kubuchwephesha bomsebenzisi obuphambili, kunye nokujonga ukukhankanywa kwegama ... ukubala ezimbalwa.
Oku kunokuba luncedo ngakumbi kwiiarhente okanye iinkampani ezinkulu eziqhuba iiprofayili ezininzi zemidiya yoluntu ngaxeshanye. Izithuba zinokucwangciselwa iintsuku okanye iiveki kwangaphambili, zikunike amandla okuchitha ixesha elininzi kwisicwangciso sokuyila kunokushicilela iposti nganye ngesandla.
Imizekelo yoLawulo lweMidiya yoLuntu
Ezinye izixhobo zentlalo zizonke-in-nye zinemisebenzi eyahlukeneyo eyahlukeneyo, ngelixa ezinye zithe ngqo kwiqonga okanye zijolise kwinto enye, njengokubeka iliso kwimidiya yoluntu. Makhe sijonge imizekelo embalwa:
Uhluma lweNtlalo -Ihlumelo leNtlalontle sisixhobo somlingo sonke-in-one kulawulo lweendaba zosasazo. Isisombululo sinika abasebenzisi isuti yonke yeempawu ezibandakanya i-post automation, i-granular yokuzibandakanya kwe-analytics, kunye nengxelo yokusebenza.
Qalisa isilingo sasimahla sovavanyo lwentlalo
Ihlumelo leNtlalontle laziwa ngokujongana noluntu kunye nokunika ingxelo phambili. Ukuba ukuthengisa kwimithombo yeendaba kwezentlalo ngumqhubi ophambili wengeniso kwishishini lakho, uHlahlwayo kufanelekile kutyalo-mali.
Hootsuite -IHootsuite liqonga lolawulo lweendaba ezithandwayo elungiselelwe abantu kunye namashishini abo bonke ubukhulu. Esi sixhobo sinikezela ngezixhobo eziqhelekileyo njengokucwangciswa kweposi, kunye neempawu eziphambili ezinje ngeedashboard ezinokwenziwa ngokwezifiso, ulawulo lweentengiso zentlalo, kunye nohlalutyo lobukrelekrele beshishini.
Cela iDemo yeDootsuite
Umahluko omkhulu weHootsuite? Ixabiso layo elifikelelekayo. Kukho inqanaba lasimahla elivumela amandla okucwangciswa okusikelwe umda. Ukuba iqela lakho lifuna isisombululo esineendleko ngakumbi esisasebenza ngokupheleleyo, iHootsuite lukhetho oluqinileyo.
Inkqubo yoLawulo loLawulo
Inkqubo yolawulo lomxholo (i-CMS) ibonelela ngokusebenza ukulawula, ukugcina, kunye nokupapasha umxholo wedijithali. Oku kubandakanya isicatshulwa, imifanekiso eyilwe, ividiyo, iaudiyo, kunye nazo zonke ezinye iiasethi zedijithali ezongeza kumava ewebhusayithi. I-CMS ikuvumela ukuba ubambe wonke lo mxholo ngaphandle kokufuna ukwakha ikhowudi entsha ukusuka ekuqaleni.
Ukuba iqela lakho lijolise ekwenzeni umxholo omtsha rhoqo, isisombululo se-CMS sisidingo. Uninzi lwezixhobo ze-CMS zikwabonelela ngemisebenzi eyongezelelweyo ye-SEO eyenza ukuba kube lula ukuphucula umxholo wophando lwe-organic- olunokunceda ukuba lubonakale ngakumbi.
Ukukhetha i-CMS elungileyo yeshishini lakho kunokuba yinkohliso kuba isixhobo kufuneka sidibane ngaphandle komthungo kunye nezixhobo ezikhoyo zewebhusayithi yakho. Ngethamsanqa, uninzi lwezisombululo zolawulo lomxholo ziyilelwe ukwenza kanye loo nto. Apha ngezantsi, uya kufumana iindlela ezimbini ezithandwayo:
IHubpot CMS Hub Njengoko bekutshiwo ngaphambili, iHubSpot ngumboneleli ophambili wesoftware yokuthengisa, ukuthengisa kunye namaqela enkonzo yabathengi. Ukunikezelwa kwe-CMS yeHubSpot lukhetho oluthandwayo kumaqela amaninzi okuthengisa umxholo. Iimpawu ezibonakalayo zibandakanya ukugunyazisa umxholo, umhleli wombhalo osisityebi, kunye needashbhodi ezinamandla zokunika ingxelo.
Cela a Hubspot Idemo yeCMS
Kuba iqonga leHubSpot sele liza nezinye izisombululo ezakhelwe-ngaphakathi njengeCRM kunye nentengiso ezenzekelayo, olu lukhetho oluhle kubathengisi abafuna yonke into inye. Ukongeza, iHubSpot CMS ikuvumela ukuba xuba kunye nomdlalo Iimbonakalo. Ukuba ufuna ukusingatha iblogi yakho kwiqonga elahlukileyo, kodwa usebenzise i-CMS yeHubSpot kwiphepha lokufika kwiwebhusayithi yakho, unako.
WordPress -I-WordPress yinkqubo yolawulo lomxholo ovulekileyo. Isoftware isebenza ngendlela evumela abasebenzisi ukuba bafake iiplagi ezahlukeneyo kunye neetemplate ukwenza ngokwezifiso ukusebenza kunye nokubonakala kwewebhusayithi yabo.
Qalisa indawo yeWordPress
I-WordPress yenye yezona zixhobo zakudala nezisetyenziswa kakhulu kwi-CMS kwintengiso. Ngale nto ithethwayo, ikwasisixhobo esizimeleyo, oko kuthetha ukuba usafuna ukufumana umniki-webhu wokubamba kunye nokwenza ikhowudi yesiko ukuze isebenze.
Kwimakethi ye-tech-savvy efuna amathuba okwenza ulungelelwaniso olungapheliyo, i-WordPress iya kuba ngumhlobo wakho osenyongweni.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba olu luhlu alukufutshane nokuba luphelele.
Ukuba uyijack yawo onke amashishini, unokusebenzisa zonke ezi zixhobo zesoftware kwaye ezinye; unokuba nezixhobo ezahlukeneyo ezisebenza ngcono kwiinjongo zakho. Ukuba indima yakho ijolise kwimisebenzi ekhethekileyo yehyper, enje ngentengiso yedijithali, kunokwenzeka ukuba isitaki sakho sentengiso sijongeka sincinci.
Into emnandi malunga nokufakwa kwetekhnoloji kukuba unamandla okuyenza ngokwakho. Ngezi ngcebiso engqondweni, unokucacisa kancinci ezona zixhobo zibalulekileyo eziza kwenza ukuba iqela lakho lokuthengisa liphumelele ngokukodwa.
Isoftware yokuthengisa inamandla kuphela njengomntu oyisebenzisayo. Fumanisa ukuba iqela loMkhokeli lingalinceda njani ishishini lakho yandisa okudlulileyo kwisitaki sakho sobuchwephesha ukuhambisa iziphumo zokuthengisa ezinzulu.
Ukubhengezwa: Kukho amakhonkco onxibelelwano asetyenzisiweyo kweli nqaku.
tags: ahrefsasanaCRMulawulo oludibene nabathengiUngayakha njani i-martech stackIHubpot cmscrm engacaphukisimailchimpUMarc Andreessenukuzenzekela ngokuzenzekelayoisitaki setekhnoloji yentengisoItekhnoloji yentengiso yentengisoisitaki seMartechulawulo lweprokjekthiii-saasukuthengisaenjini yokukhangela nounulawulo lweendaba ezentlaloWordPress
U-Izabelle Hundrev ngumbhali womxholo osekwe eChicago kwi-Directive. Umthandi wobomi bonke wokufunda nokubhala, waphumelela isidanga sobuntatheli kwiDyunivesithi yaseMissouri ngo-2017. Emva kokuthweswa isidanga, u-Izabelle waqalisa ikhono lokuthengisa kwi-B2B apho wayegxile kuphuhliso lweshishini. Emva kweminyaka eyi-1.5 ekuthengiseni, wabuyela kwiingcambu zakhe zobuntatheli kwaye wenza utshintsho lomsebenzi kwikhondo lokuthengisa.